Home Wararka Sawiro:Xaalada Jigjiga O wali kacsan+bililiqo Xoogan Oo ka socoto,
Sawiro:Xaalada Jigjiga O wali kacsan+bililiqo Xoogan Oo ka socoto,
Wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya Magaalada Jigjiga xarunta dowlad degaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya ayaa waxa ay sheegayaan in Magaaladaasi ay ka socoto Bililiqo ka dib markii ciidamada dowladda dhexe ee Itoobiya ay la wareegeen.
Sidda ay xaqiijiyeen dadka degaanka Ciidamadii Federaalka ayaa Magaalada ka wadda Bililiqo xooggan.
Ciidamada dowladda Dhexe ee Itoobiya ay la wareegay xarumaha ugu muhiimsan dowlad degaanka Soomaalida ee ku yaalla Jigjiga.
Ilaa iyo Hadda meelaha ay bililiqaddu ka socota waxaa ka mid ah xarunta Bangiga dhexe ee Magaalada Jigjiga, waxaa sidoo kale bililiqo ka socotaa Goobo ganacsi oo ku yaalla Magaalada Jigjiga.
Waxaa sidoo kale jira Khasaare ka dhashay Isku dhac dhexmaray Ciidamada Liyuu Boolis iyo kuwa dowlada dhexe ee saakay qabsaday magaalada.
Previous articlekhayre Oo Amray in Laxiro Wasiiir ku Xigeenka Arimaha Dibadda Soomaaliya&Ilaalada Wasiirka Oo dagaal kala hortagay Ciidamadii damacsana inay xiraan
Next articleKaniisada Jigjiga Oo Gubaneyso&Xaalka Oo Cakiran,
Taliska Booliska Gobalka bari oo digniino culus soo saaray
Xal laga gaaray xiisad maalmahaan ka taagneed Magaalada Boosaaso